> Resource > iPod > Sida loo saar Music Videos on iPod
Sida filimada gaaban, Music videos ha aad jeceshahay heesaha oo sanamyada cad ah. Haddii aad jeceshahay daawashada cajaladaha muusikada, aad rabto in aad ku daraynaa in aad iPod. Si aad ku dari videos music in iPod, waxaad isku dayi kartaa barnaamijka wejiyo - TunesGo Wondershare . Waxayna u shaqaysaa iyadoo computer Windows. Haddii aad isticmaasho Mac ah, Wonderhsare Mobile Tag ee macruufka (Mac) yimaado tahay caawimada. Labada qeybood oo awood inaad videos badan oo music aad iPod goobtii, iyo sii midda aad ku daray hore.
Download barnaamijkan on your computer.
Sida loo dhigay videos music on iPod
Download version saxda ah ee barnaamijkan sida ay xaaladdaada. In qayb hoose, waxaan isku dayi doonaa TunesGo Wondershare. Hadda aynu ku bilaabi!
Tallaabada 1. Orod barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPod in kombiyuutarka
Si aad u bilaabaan oo leh, ordo TunesGo Wondershare on your computer ka dib marka aad ku dhameysan rakibo. Isticmaal iPod ee USB cable in ay ku xidhmaan aad iPod in kombiyuutarka. Sida ugu dhakhsaha badan barnaamijkan ogaadaa aad iPod, waxaa tusi doonaa iPod uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: The version Windows taageertaa dheeraad ah lagu daydo iPod badan version Mac ah. Iyadoo version Windows - Wondershare TunesGo, si aad u iPod xiriiri 4/3/5 socda macruufka 5/6 iyo macruufka cusub 7, iyo nano iPod / iPod classic / iPod shaandheeyn lagu gelin karaa videos music. Riix oo dhan iPods taageeray si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah . The version Mac kuu ogolaanaysaa inaad ku darto videos music in iPod xiriiri 5 iyo iPod xiriiri 4 socda macruufka 6/5/7.
Tallaabada 2. videos music Gasho iPod
Sida aad ka arki, faylasha aad waxaa lagu soo bandhigaa galeeysid bidix. Guji "Media". On line ugu sareeya, waxaad ka arki kartaa files badan warbaahinta, sida music, filimada iyo videos music. Riix Music Videos inay soo qaadaan suuqa kala music video ah. By gujinaya "Add", waxaad ka heli suuqa kala file browser. Raadi meeshii videos music waxaa lagu badbaadiyey. Markaas, iyagoo aad ku dartid aad iPod.
Si aad ku dari videos music in iPod, waxaad sidoo kale riixi kartaa saddexagalka rogay "Add" hoos. Markaas, waxaad ka heli labo ikhtiyaar: "Add File" ama "Add Folder". Dooro aad rabto. Markaas, darto files music video (folder) si aad iPod.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waad ku daray videos music aad iPod. Nasiib wanaag, videos music hore aad ku daray waa weli waxaa jira. Waa shaqo wanaagsan, soo maaha? Marka laga reebo videos music, waxaad ka dhigi kartaa music, buugaag, filimada, podcasts, Lugood U iyo TV muujinaysaa aad iPod si la mid ah.